Leicester City ayaa gaartay guul muhim ah kadib markii ay ka badisay kooxda Tottenham… – Hagaag.com
Leicester City ayaa gaartay guul muhim ah kadib markii ay ka badisay kooxda Tottenham…
Posted on 20 Diseembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Leicester City ayaa soo gashay kaalinta labaad ee kala sarreynta Premier League ka dib markii ay guul muhiim ah oo ay u qalantay laba gool ka gaartay Tottenham, Axada maanta ah wareega 14aad ee tartanka, dhinaca kale Sheffield United ayaa barbaro 1-1 la gashay Brighton.
Waxaa kor u kacay dhibcaha Leicester oo gaartay 27 dhibcood oo ku jirta kaalinta labaad, iyadoo 4 dhibcood ka hooseysa Liverpool (kooxda difaacaneysa koobka), oo ku jirta kaalinta koowaad.
Dhanka kale, dhibcaha Tottenham ayaa ku istaagay 25 dhibcood, waxay hoos ugu degtay kaalinta shanaad si ku meel gaar ah.
Leicester ayaa ahayd kooxdii hogaamineysay ciyaarta, waxay ciyaartoydeedu ay dhalin kareen goolal intaasi ka badan, haddii aanu nasiibku ka hiilin.
Xiddiga Leicester Jimmy Vardy ayaa dhaliyey goolka koowaad daqiiqadii 4-aad ee wakhtiga dheeraadka ah ee qaybtii hore ee ciyaarta, kaasina wuxuu u noqonayaa goolkiisii ​​11-aad ee tartanka xilli ciyaareedkan, wuxuuna la wadaagayaa kaalinta labaad ee kala sarreynta gooldhalinta tartanka laacibka Son Heung-min iyo Dominic Calvert-Lewin oo u kala ciyaara Tottenham iyo Everton. Laba gool ayey ka dambeeyaan xiddiga reer Masar Mohamed Salah, ciyaaryahanka Liverpool, kaasoo haatan ah gooldhaliyaha ugu sareeya.
Goolka labaad ee Leicester ayaa ku yimid gool ay iska dhaliyeen Tottenham, ka dib markii daafaca Tottenham Toby Alderwereld uu gool khalad ah ka dhaliyay kooxdiisa (60), halka ciyaartoyda Tottenham ay awoodi kari waayeen inay yareeyaan farqiga goolasha waqtiga ka haray ciyaarta.